Minisitra Atallah Béatrice : “Mikatsaka ny fahamarinan-toerana politika ny Sadc” (NewsMada) | AEMW
Minisitra Atallah Béatrice : “Mikatsaka ny fahamarinan-toerana politika ny Sadc” (NewsMada)
Vahinin’ny fandaharana “Savaravina”, tao amin’ny RNM, omaly ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice. Nitondrany fanazavana avokoa ireo raharaha mahakasika ny minisiterany sy ny fifandraisana amin’ny any ivelany. Anisan’izany ny Sadc sy ireo Nosy manodidina ary koa ny handraisana ny Frankofonia. Ampahan’ny resadresaka.
Mpanao gazety (+) : Aiza ho aiza isika amin’ny fanomanana ny Frankofonia, indrindra ireo fotodrafitrasa. Nandeha ny resaka fa miato ny asa fanamboarana ?
Atallah Béatrice (-) : Eny amin’ny CCI Ivato avokoa ny toeram-pivoriana rehetra mandritra ny Frankofonia. Mizotra mankany amin’ny fahatomombanana ny fikarakarana. Ho anay manokana ao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, efa vonona izahay na hatao rahampitso aza ireo fivoriana ireo. Tsara ho fantatsika fa efa maro ireo filoham-panjakana mpikambana ao amin’ny OIF efa namaly an-tsoratra na am-bava fa ho avy eto hanatrika io fotoan-dehibe iraisam-pirenena io: anisan’izany ny mpanjakan’i Maraoka, ny filoha ivoarianina, ny filoha senegaley, ny filohan’ny kaonfederasion’i Soisa, ny delegasiona avy any Kanada, avy any Frantsa, eny fa na i Ban Ki-Moon aza mety mbola hiverina eto Madagasikara hanatrika izany… Voninahitra an-tsobika, hono tsy hatao am-patram-bary.
Trangan-javatra mety hisy ny tsy ahavitan’ny asa sasany, saingy araka ny filamatry ny filoham-pirenena, mifototra amin’ny fanatsarana an’i Madagasikara sy ny Renivohiny ary ny manodidina azy no isan’ny tanjona.
+ Aiza izao ny antontan-taratasy momba ireo Nosy manodidina ? Inona ny olana tsy hamerenana azy io ho antsika nefa ny fehinkevitra ny taona 1979 milaza fa tokony haverin’i Frantsa amintsika ireo Nosy ireo. Efa nisy ve ny fifampiresahana?
– Mifototra amin’ny fifampiraharahana sy fifampiresahana ny diplomasia manaraka ny toetry ny andro. Mampirisika an’i Madagasikara sy i Frantsa hifampidinika ny fehinkevitra 34/91 sy 35/123. Efa nifampiresaka momba io “Raharaha Iles éparses” io ny filoham-pirenena roa tonta ary samy naneho fahavononana ny hiresaka. Vokany, efa teraka ny vaomiera iombonana hisahana izany. 37 taona izany izao, tsy voavaha io raharaha io ! Roa taona sy tapany nitondran’ny filoha Rajaonarimampianina, tafapetraka ny Vaomiera iombonan’ny tany roa tonta, tsy nisy nandritra ny 37 taona. Izany hoe, manomboka mikitika io raharaha io ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Raharaha tsy voavahan’ny sasany tao anatin’ny 37 taona no terena hovahana ao anatin’ny fotoana fohy.
+ Fifandrifian-javatra manoloana ny fanehoan-kevitra politika nisesisesy tato ho ato ny ve fandalovan’i Chissano sa mbola mila ny Vondrona afrikanina isika amin’ny asa fanelanelanana politika, indrindra amin’izao toerana misy antsika izao ?
-: Lasa tamin’ny zoma teo i Chisano, iraka manokan’ny Sadc. Tsy tonga eto hanelanelana izy satria fantatsika fa tamin’ny andron’ny Tetezamita ny resaka fanelanelanana ary voalazan’ny sori-dalana fa tapitra izany fanelanelanana izany rehefa nipetraka ny filoham-pirenena, lanim-bahoaka.
Nanao fanaraha-maso ny zava-misy eto izy mba hahazoany mametraka ny tatitra ataony satria fantantsika fa tamin’ny Sadc nametraka ny sori-dalana teto ary nandrindra ihany koa ny fivahan’ny krizy, tsy mbola nikatona tanteraka ny asa nataon’izy ireo. Amin’izao fotoana izao izany ry zareo mijery hoe aiza ho aiza ny amin’iny. Ary nihaona tamina tomponandraikitra maromaro, nihaona tamin’ny filoham-pirenena ihany koa. Tsy i Madagasikara irery fa ireo toerana rehetra iasan’ny Sadc na misy krizy, andalovan-dry zareo amin’ny maha iraka manokana azy. Fotoana iray ahafahany mandrefy ny zava-bitan’i Madagasikara hatramin’izay raha oharina amin’ny fiandohan’ny krizy iny fitsidihana iny. Averimberina etoana fa tsena ny Sadc ka mikatsaka hatrany ny filaminana ara-politika ny Sadc hahamarim-pototra ny fitondrana misy.
+ Inona ny vokatra azo tsapain- tanana avy amin’ny fiaraha-miasa amin’ny sinoa ?
-Hamaliako ny fanontanianao ny anton-diany tany Sina farany teo. Ny tenako, amin’ny maha-minisitry ny Raharaham-bahiny ahy, sy ny minisitry ny Asa vaventy no nanasonia fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Ara-tantara, nametraka vovonana iray i Sina sy i Afrika ahafahana manantateraka ny fiaraha-miasa. Notontosaina tao Afrika Atsimo izany ary natrehin’ny filoha Rajaonarimampianina. Maro ny tapaka tamin’io fihaonambe io ka ho fanatanterahana ny fampanantenan’ny filoham-pirenena ny hanamboarana ny lalana mirefy 18 km ahafahana mamoaka ny vokatra, indrindra ny atody. Vitanay tany Sina, andro vitsy lasa ny sonia momba ny hamatsiam-bola 23 tapitrisa dolara io lalana io. Ny tombony, mitombo ny fotodrafitrasa ananan’ny firenentsika. Afaka mifamezivezy eo amin’io lalana io ny olona sy ny entam-barotra. Hiha matihanina ny tantsaha amin’ny famokarana atody ary hiteraka fidiram-bola ho an’ny mpamboly sy mpiompy eto Antananarivo sy ny manodidina azy io lalana io. Hanjaka ny fifaninanana ary ho lasa vokatra afaka hifaninana eo amin’ny sehatra anatiny sy iraisam-pirenena ny vokatra malagasy. Mitombo ny vola vahiny tehirizintsika ao amin’ny Banky foibe. Mihamahazo aina ny vola malagasy. Ankoatra izany, nampanantena ny hamatsy vola ny Sinoa momba ny hananganana trano iray vaovao ho an’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Moa tsy vokatra azo tsapain-tanana avokoa ve izany ? Moa tsy diplomasia mifantoka amin’ny toekarena va izany ? Santionany fotsiny izany omeko anao izany. Fa izao no aza hadinoina: Tsy i Sina irery anie no miara-miasa amin’i Madagasikara…
Nangonin’i Synèse R.
← Faran’ny herinandro : nisesy ny haintrano, entana antapitrisany lasa lavenona (NewsMada)
Hitsy toraka : hiomany dieny izao (NewsMada) →